Ao amin'ny tambajotra LAN 192.168.8.100 dia ny IP. Olona marobe no tsy mahita ny fomba fidirana amin'ny router tsy misy tariby WIFI. Azonao atao ny manandrana manindry ny rohy: https://192.168.8.100 midira ao amin'ny interface admin. Raha tsy afaka miraikitra ianao dia azonao atao ny manondro ny fanontana fidirana amin'ny fitantanana router. Raha hadinonao ny anaranao sy ny tenimiafinao dia zahao fotsiny ny marika na ny bokin'ny router.
Adiresy IP mampiasa 192.168.8.100, ahoana ny fampiasana azy?
Voalohany, hampiroborobo ny fahaizany mizara adiresy IP. Ny adiresy IP dia voasokajy ao anaty karazany 5 amin'ny ABCDE, ao anatin'io no ampiasaina matetika ny ABC. Anisan'ireo karazana adiresy 3, ny fizarana iray dia adiresy voatahiry, ary tsy azo ampiasaina ny fonosana miaraka amin'ireo adiresy ireo. Avy hatrany dia niparitaka tamin'ny Internet, ny IP dia adiresy voatahiry ao amin'ny adiresy kilasy C, ampiasaina matetika amin'ny tamba-jotra LAN, ny mason-tava mason-drakitra adiresy kilasy C dia 255.255.255.0, milaza fa ny adiresy kilasy C dia mety hipetraka 256 IPs Miharihary, miaraka amin'ny iray solontenan'ny tambajotra, misy aza ny fandefasana solontena iray. 254 fotsiny no azo tendrena ho an'ny mpampiasa. Ohatra, ny IP mpampiasa ny tamba-jotra 192.168.1.0 dia mety avy amin'ny 1-254. Ny fifandraisana eo amin'izy ireo dia tsy mitaky fitetezana ny router. Afaka mihetsika mivantana ireo rakitra.
Raha lazaina dia miely be ny hevitra an'ity adiresy IP ity. Satria adiresy voatahiry io dia mampiseho fa mety ho ampiasaina amin'ny LAN koa izy io. Raha ny mahazatra, izy io dia ampiasaina ho IP mpampiasa, satria ny IP ampiasain'ny mantissa .1 dia matetika no tazonina ho amin'ny fidirana, noho izany 192.168.1.2-192.168.1.254 dia natokana ho an'ny mpampiasa tokoa. Raha ao amin'ny LAN dia misy mpizara DHCP, azonao atao ny mametraka ny vondrona adiresy IP amin'ny 192.168.1.2-192.168.1.254. Ity lahatsoratra ity dia mandamina ho azy ny adiresy IP ho an'ny mpampiasa.
Ny zavatra iray hafa dia ny router tsy misy tariby dia matetika ampiasaina ankehitriny. Raha ny mahazatra, ny seranan-tsambo IP LAN an'ity karazana fitaovana ity dia matetika manana mantissa .1. Soso-kevitra ny hanovan'ny mpanjifa ny seranan-tsambo LAN IP amin'ny adiresy fanampiny, ka tsy ho vinan'ny mpanjifa hafa. Tsidiho ny router Wireless LAN port IP ohatra, IP safidy tsara. Mazava ho azy, ny LAN port IP dia mety hapetraka koa, tsy ilaina ny misafidy ny IP amin'ny fampiasana ny fizarana tambajotra voalohany. Ny IP an'ny fizarana tambajotra isan-karazany dia miafina & azo antoka; na izany aza, tokony ao an-tsainao ny manova ny fidiran'ny mpampiasa amin'ilay mifanitsy aminy, raha tsy izany dia tsy hahalala ny fomba fampifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Vitsy ny orinasa kely na sekoly mangataka ny hametrahana adiresy IP ivelan'ny IP, ary hampiasa ny fizarana IP manaraka hampiasa ny orinasa na ny rafitra sekoly hidirana amin'ny harato. Ny adiresy IP ampiasain'ny masinin'ireo sekoly na orinasa toy izany dia ny IP intranet.
Tokony holazaina fa ny PC amin'ny tamba-jotra anatiny dia mety mandefa fangatahana fampifandraisana amin'ireo PC hafa amin'ny Internet, mbola misy PC samihafa amin'ny Internet tsy afaka mandefa fangatahana fampifandraisana amin'ireo PC amin'ny tambajotra anatiny noho ny mpizara FTP amin'ny tambajotra ivelany.